ahoana ny fomba fiasan’ny reputation fitarihana | ny valin’ny media sosialy
April 20, 2017 by Mario Head
Ny Tena fampiasa matetika fizahana temimaso SY NY Famaritana Reo fepetra Avy amin’ny United States Foibe miady Amin’ny temimaso (CDC) navoaka. Ny sandan’ny CDC ho an’ny tsirairay amin’ireto orinasa manaraka ireto dia:
Ny dingana voalohany mavesatra fitantanana ny fanaraha-maso mikasika ny olona na raharaham-barotra, voalohany indrindra amin’ny alalan’ny haino aman-jery sosialy sy tsara lamina fanaraha-maso ny fikarohana fanontaniana. Sy ny haino aman-jery sosialy Analytics dingana mitovy amin’ny valin’ny fikarohana manampy mba hanafaka ny Snapshot ny hevi-bahoaka amin’izao fotoana izao ny olona na ny raharaham-barotra eo amin’ny fanontaniana ary avy eo ny fampielezan-kevitra dia azo natao ny miresaka olana izay olana izay nambara.
Ny Sparkcentral dia novolavolaina manokana mba hanampy ireo orinasa hanara-maso ny fangatahan’ny mpanjifa amin’ny media sosialy. Ity marika voalaza ity dia afaka manara-maso ny tweet, ny chat, na ny lahatsoratra Facebook amin’ny fotoana rehetra, ary alefaso haingana any amin’ny ekipa mpividy ny marika.
Tsy afaka ny hanaisotra ny fidiran’ny fidirana an-tserasera rehetra ianao, fa mety hikapoka azy ireo. Hatramin’izao, dia mifantoha amin’ny zavatra azonao atao mba hanohanana ny lazanao amin’ny fomba tsara, ary handevina ny valiny izay tsy ho hitanao. (Vakio ato ny mianatra ny fomba ahafahanao mamorona laza tsara amin’ny Internet.)
Tanana tamin’ny 2012, Sony, nanomboka nanolotra Fitaovana Fampandrosoana NY Lao mpandraharaha ahitana NY streamlined PC Zay akondro NY AMD (haingana pana Fikarakarana) chipset. Toy ny hoe orbis kely kely izany. Tamin’ny tanana fiandohan’ny 2013, Sony nanambara Fa ny Fanolorana fantatra toy ny PlayStation fivoriana 2013 ho an izay New York tamin ‘ny 20 Febroary 2013 hanambara matoky ny “ho an avy NY PlayStation”. Sony nanambara ny Office Stationaly ny PlayStation 4. Ny vokatr’izany, ny PS4 dia singa manan-danja amin’ny fampandrosoana ny PS4. Sony dia sary iray hafa koa ho an’ny fampandrosoana, ary koa ny teknika ny transit.
Manokana, Social Sioka mamela anao hahafantatra ny fomba ny marika matetika no resahina (ny herinao), ahoana no azo inoana fa olona mba hamerina ny zavatra izay mividy momba ny marika, ny vokatra ny fanehoan-kevitra, ary ny fihetseham-po ivohony.
FleishmanHillard dia miasa miaraka amin’ny orinasam-pivarotana ara-bola sy matihanina mba hampifanarahana amin’ny fomba vaovao amin’ny fanaovana raharaham-barotra sy fifandraisana. Ny fomba nivoatra ny toerany dia manampy amin ‘ny fomba izay mandrisika ny fitokisana sy ny lazany – ary nanapaka ny alalan’ Fifaninanana mba hanazavana ny zava-dehibe amin’ny fomba izay mitarika fandraharahana tanjona.
Momba ny haino aman-jery sosialy takatry alalan’ny tatitra indray manan-danja ara-tsosialy Relevant mari-pandrefesana ny fandraharahana tanjona izany no hanome anareo vaovao momba ny Engagement haavon’ny ny haino aman-jery sosialy sy ny hetsika dia hamantatra ny mpanara-ara-tsosialy izay miresaka momba anao ny tena, afa-po ny fizarana sy ny sisa. Hanome anao fanazavana manan-danja ao amin’ny tambajotra sosialy manodidina ny orinasanao izany.
Izy io dia manolotra NY Recherche momba NY fiarovana SY NY filaminana bikany. Betsy mitombo Manama pahaizana momba NY fiarovana amin’ny Serasera Lanao toky hiarovana NY Mombamomba Lanao. Misy NY dia tsy misy Zay Manana ASA lehibe tadiaviny hangalatra fampahalalana manokana SY-ara simba. izany dia maneho ny tena amin’izao fotoana izao sady mitondra sisin’ny fikarohana momba ny rafitra fiarovana sy ny filaminana. Tsy voatery ho manam-pahaizana fiarovana an-tserasera mba hiarovana ny vaovao. Misy olona avy any izay asa lehibe dia miezaka hangalatra manokana sy ara-bola vaovao.
Ny PS4 maty 8 GB NY miray amin’ny rafitra Fahatsiarovana GDDR5 NY tampon’isan’ny NY passante NY 176 GB
Betsaka ny olona tsy nijery tambajotra matanjaka raha ny fanaraha-maso ny marika. Raha manana tambajotra mafonja ianao, indrindra fa ireo olona ao amin’ny orinasa izay mijery ireo sora-baventy mitovy aminao, dia hahazo vaovao farany ianao nefa tsy mangataka akory aza.
Ny sitrapon’ny vahoaka sy ny fototry NY fahefan’ny fitondram- panjakana Amin’ny Fifidianana sy ny tokony hanehoany Any sitrapony na, ny tokony ho marina SY hisy ara-potoana Fifidianana Any misy. Handraisan’ny daholobe NY Sanjar ary miafina ny Tsa-ara-pomba mitovitovy amin’izany ny miantoka NY fahalalahan’ny Fifidianana.
Noho na, diso Fanantenana NY tontolon’ny bilaogy ny bokotra taitra koa Zain – Raha tamin’ny Alatsinainy 10 Oktobra 2016, tamin’ny fitsarana amin’ny atonton-kintan’i Sukhdeo pananana Betsy Te hanohy intsony Reo vesatra niampangany ny vadiny ..
Mandehana any amin’izay misy ny mpanjifanao: Ilaina ny fisafoana ny fantsom-peo marina, na izany ho an’ny chattenan’i Twitter na fanentanana sosialy. Amin’ny fanaraha-maso ny resadresaka manodidina anao
Burger Raharaham-barotra iraisam-pirenena angamba miaraka amin’ny fanatrehany sy manan-danja marika fampiasam-bola na amin’ny haino aman-jery ara-tsosialy tena mavitrika asa mety mila ny fanampian’ny manam-pahaizana manokana anaty fiara fitaovana izay hanara-maso, collate sy Ankehitriny foibe vaovao amin’ny fototra. Ho an’ireny fepetra manokana ireny dia misy fitaovana maromaro eny an-tsena ary afaka manoro hevitra anao momba ny fisafidianana ianao ary manangana araka izay takiana.
Betsy avelanny fitondram panjakana aminizao fotoana hisokatra mialoha NY onjam-peo SY NY televizionanny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) dia misy fiaraha miasanny fiadidiana NY NY tannanAntananarivo aminireo haino aman jery Etsy miankina eto an-drenivohitra,
Sendible misintona Lahatsoratra sy ny fanehoan-kevitra avy amin’ny lehibe rehetra amin’ny sehatra media sosialy, ary koa Flickr, WordPress, sy ny Google Analytics (izay fitaovana hafa tsy manohana). Ny fitaovana dia afaka manangana tatitra manokana sy lohahevitra handinihana. Sendible ihany koa dia manome famoahana an-tsarimihetsika ho an’ireo sehatra media sosialy, ary mazava ho azy fa ny laharam-pahamehan’ny fitaovana dia eo an-dàlana fa tsy mankany amin’ny farany.
Charles Muggeridge, izay manampy amin’ny fitarihana ny ekipa momba ny fahasalamana ho an’ny biraon’i FleishmanHillard ao Toronto, dia namintina ny lahateny tamin’ny aterineto misokatra tao afovoan-tanànan’i Toronto. Ny fotoam-pivoriana dia mifantoka amin’ireo toro-loha folo faramparany mba hamoronana tantaram-panahy mahavariana. Nampiasa ny fahafahana hampiditra ny Authenticity Gap ihany koa izy ireo.
Tena fahasamihafana tokoa izany ho ahy amin’ny fandraisako ny fitaoman-dry zareo! Azonao atao ihany koa ny mampifanitsy ny maha-olona an’i Alexandra Pereira, ao anatin’izany ny 1,2 tapitrisa amin’ny Instagram. Izao no nataoko mba hahazoana antoka fa manana tombontsoa betsaka amin’ny hoavy ianao. Tsindrio ny anaran-drakitrao!
Manoro Hevitra CDC NY NY fisian’ny Reo soritr’aretina, mitady fitsaboana NY Sanya (amin’ny Ampahany) NY manilika ahitana manasitrana temimaso: temimaso Lyme, matory, matôro temimaso, fahaketrahana toe-javatra lehibe, toaka